1 Septhemba - Suku Ulwazi - umkhosi ebalulekile izimpilo zabo bonke abafundi. Ngalolu suku, insimbi yokuqala umsindo ngoba bonke labo ngokokuqala ngqá ekuphileni kwakhe kweqa embundwini esikoleni. Abafana namantombazane iminyaka 6-7 ubudala okokuqala ahlale kumadeski wabo futhi simazi kangcono ezingaziwa kuze kube manje imikhakha yesayensi. Qala impilo entsha, omdala kusinikeza ukunqoba. Lolu suku nakho kubalulekile othisha kanye nabanye abasebenzi imfundo, njengoba sesikole iqala, kanzima futhi esindayo, kanye Bonke abanenhliziyo odlule.
Holiday emasikweni Usuku Ulwazi
1 Septhemba kuwo wonke amadolobha, emizaneni ezweni lethu elikhulu ungahlangana ngokujabula ukuhamba iminyango abafundi isikhungo. Njengomthetho, kule abafundi usuku begqoke ifomu nenhle, amantombazane eluka neminsalo, nabafana ukugqoka othayi noma izimvemvane. othisha ekilasini yabo Abafundi ukunikeza izimbali. Futhi aphethwe umugqa onesizotha phambi ukuqeqeshwa, lapho insimbi yokuqala umsindo izingane encane esikoleni, abafundi basesikoleni esiphakeme dancing waltz, umculo ekwayeni lihlabelela ingoma, futhi umqondisi uthi siyakuhalalisela. Siqedile ulayini esifundweni Umhlaba, ebanjwa ekilasini ngalinye, kungakhathaliseki ubudala balezi zingane. Lapho beqeda ingxenye olusemthethweni abadala ekuseni nezingane ukuhamba ngokusebenzisa amapaki kanye boulevards, abanye ukuya emaphandleni noma cafe.
Kwezemfundo ephakeme, uSuku Ulwazi - iholidi kubalulekile freshmen. Ngalolu suku, okokuqala behlangabezana nomunye, ufunde yonke imininingwane mayelana nokuphila okunzima besitshudeni, ukuthola imibhalo futhi wathumela wathatha uhambo oluya eyunivesithi. Undergraduates njengoba 1 Septhemba usuqalile ukufunda.
Umlando holidi Suku Ulwazi
Kuze Ekuqaleni kokubusa sikaPeter Omkhulu, owabhubhisa ngokuphelele yonke isiko lasendulo futhi wethula entsha, ngo-September 1, kwanqunywa ukugubha uNcibijane nangoMkhosi Harvest. Ngemva ezinye izenzakalo ukugubha uNcibijane washukumiseleka ukuba Januwari 1st. "Ulwazi Day" ukugubha kuphela ngokuthi ngo-1984, kwaba khona-ke eU.SSR Supreme Soviet , wamnika isimo isimo. Naphezu kwakho konke lokhu, usuku 1 Septhemba bekulokhu ukuqeqeshwa, mahhala abafundi kanye nezingane zesikole ayenganikezwanga ngalolu suku. Manje wonke amasiko sisukela hhayi kusuka kuhulumeni, kunokuba ngokungaqondile isikhungo, ngakho umqondisi unelungelo lokunquma ukuthi ubambe umugqa onesizotha futhi ukuthi ukukhulula abafundi esikoleni.
Okokuqala, leli holidi lalimisa evunywe iziphathimandla ukuze agcizelele ukubaluleka eliphezulu imfundo emphilweni isakhamuzi. Kuze kube manje, isitifiketi ephelele imfundo jikelele uyisidingo, ngaphandle kwalokho kakho umuntu kuzothatha yisiphi isikhungo semfundo esezingeni eliphakeme noma umsebenzi. Hlola ukuthi eyunivesithi noma Institute of zonke izakhamuzi abasha unelungelo lokunquma bebodwa, kodwa uma izinhlelo zakho zihlanganisa zokuthuthukisa umsebenzi kanye izikhundla eziphezulu, I diploma noma i iziqu okudingayo. Kungenzeka futhi ukungena futhi ezikhethekile yesibili isikhungo emva 9 noma ibanga le-11.
Ulwazi Usuku e 1 ikilasi akusilo ehlukene kakhulu kusuka iholide kubafundi amadala. Uma ufuna ingane yakho ukukhumbula lolu suku kuze kube phakade, ukulungiselela kanye nezinye abazali nothisha uhlelo ukuzijabulisa iqhaza izinhlamvu lwasemaphusheni, namaqhawe iyiphi zezingane. Futhi ngaphezu isethulo anganika izingane ngumdlalo fun nge imincintiswano kanye giveaways. Lokhu ngeke nje hlekisa ibanga, kodwa futhi ulethe them closer iqembu elisha. Ukusiza kulungiselelwa lomcimbi futhi kungase kube nabafundi basesikoleni esiphakeme. Futhi, ungakhohlwa ukulungisa Suku Ulwazi Sihalalisela othisha besikole. Le iholidi ngabo kungekho ayibalulekile kunalokho abantwana bakho, ngakho ake othisha sizojabula nani!
Abasebenzi Isikhathi commissariats lempi - okunokwethenjelwa yethu emuva
Cocktail Dress - bagqoke ngesikhathi